Chihuahua oo timo dhaadheer leh - Tilmaame Tilmaam dhameystiran - Taranka
Chihuahua oo timo dhaadheer leh - Tilmaame Tilmaam dhameystiran
The timo dhaadheer Chihuahua waa qadiim ey ey kaas oo leh qalbi weyn oo si adag daacad ugu ah dadka iyo ilaaliyayaasha xirmadooda. Iyagu waa kuwa ugu yar Eey adduunka, miisaankeedu yahay 3-6lb, waana mid ka mid ah eyda dayactirka yar oo cimrigoodu yahay 15-20 sano.
Kuwani eeyaha yaryar ee firfircoon waxay adduunka ku qaadaan tallaabadooda.
Chihuahuas ku yimaadaan dhammaan qaabab kala duwan, midabada, iyo noocyada jaakadda laakiin, qodobkan wuxuu si gaar ah diiradda u saarayaa timaha dheer ee chihuahua.
Maxay ku kala duwan yihiin jaakad siman iyo jaakad dheer Chihuahua? Waa sidee mid yeelasho maxaadse u baahan tahay inaad ogaato kahor intaadan iibsan eeygan?
Astaan ​​dheer oo Chihuahua ah
Cabir 6-9 ″ oo dherer ah
Nolosha qofka 15 - 20 sano
Nooca Taranka Ciyaaraha
Ku Haboon Dadka waaweyn oo keliya guryaha
Kala duwanaanta Midabka Madow, bunni, tan, casaan, buluug, cadaan iyo kareem
Dabeecad Daacadnimo, kalgacayl, akhlaaq xumo, adadag iyo ciyaar ciyaar
Magacyo Kale Timo Dheer Chi
Guudmarka Chihuahua Timo Dheer
Chihuahua Eeyo Dheer Oo Dheer
Eygan Ma Ku Fiican Yahay Carruurta?
Eygan ma ku fiican yahay xayawaanka kale?
Eygan ma la xanuunsadaa Cudurka Ey Yar?
Tilmaamaha Daryeelka Chihuahua (Quudinta, Jimicsiga, Qurxinta & Tababbarka)
Shuruudaha Cuntada iyo Cuntada
Muuqaal Chihuahua oo Timo dheer leh: Coat, Midab iyo Aroos
Arooska Chihuahua oo Timo Dheer
Waxaa loogu magac daray gobolka Chihuahua (Mexico), eeygan yar ayaa ah adduunka ugu yar .
Eeyahaani waxay soo jireen ilaa 100 AD, inkasta oo awoowayaashood eyga Techichi , Taariikho xitaa dib u sii dheer, oo lagu sawiray sawirada godadka ilaa 300 BC.
Waxaa loo maleynayaa in Chihuahuas loogu talagalay labo ujeedo:
Si loo ugaarsado jiirka iyo xayawaannada kale ee yaryar
Sida cunnada guud ee qarnigii 15aad
Chihuahuas waxaa markii ugu horreysay lagu arkay Ameerika dabayaaqadii 1800-meeyadii markii ay ka soo guureen Mexico.
Weligoodba waxay ku sii kordhayeen caan, eeyahaas yar waxay noqdeen waxyaabo moodada lagu qurxiyo ka dib markii lagu arkay filimkii 2001 Legally Blonde - Elle Woods waxay lahayd Chihuahua loo yaqaan Bruiser Woods .
Waxaa jira laba nooc oo Chihuahua ah , Apple ayaa madax ah iyo Deer ayaa madax ah (inbadan oo ka dib).
Chihuahua waxaa aqoonsaday Naadiga Kennel-ka Mareykanka ee qeybta eyga toy-ga.
Chihuahuas timo dhaadheer looma aqoonsana inay yihiin ey ey gaar ah, maxaa yeelay waxaa lagu ururiyaa ilmaadeeradood timo gaaban.
Caannimadooda darteed, iyo xaaladooda moodada awgeed, Chihuahuas Timo Dheer ayaa ah kuwa ugu nasiibka xun nasiib-wanaagga kuwa daaqsinka dambe.
Bixiyeyaasha daarada (ama puppy mills) caadi ahaan waa hiwaayad ama xirfadlayaal xirfadlayaal ah kuwaas oo mudnaanta siiya eeyaha taranka si ay faa'iido uga helaan iyadoo aan loo eegin abtirsiin, caafimaad, iyo u hogaansanaanta heerarka taranka.
Chibuahua Ey Yar oo saafi ah oo saafi ah waa inay ku kacdaa $ 500 illaa $ 1,500 USD. Eygaaga yar waa inuu ku kori karaa ugu yaraan heerka soo socda:
6 bilood 4 2 4 2
12 bilood 7 3 7 3
18 bilood 7 4 7 4
Haddii eeyahaagu aanu ku korin heerka caadiga ah, isla markiiba ha ka welwelin. Chihuahuas Timo dhaadheer waxay ku yimaadaan qaabab iyo cabbirro kala duwan; markaa waa caadi haddii aysan u hoggaansamin heerka la soo jeediyey ee kor ku xusan, illaa iyo inta waxay la jaan qaadayaan heerka sinjiga .
Haddii eeygaagu aad u culus yahay ama ka miisaan yar yahay waxaa muhiim ah inaad talo caafimaad ka raadsato dhakhtarka xoolaha halka ay ku habboon tahay.
Eyga Long Haired Chihuahua waxaa lagu yaqaan dabeecad jacayl iyo daacadnimo. Waxay kala yihiin ilaalinta milkiilayaashooda , iyaga oo ku jecel iyaga oo leh fiber kasta oo jiritaankooda ah waxayna ugu faraxsan yihiin marka la dul dhigo dhabta dhabta ah ee milkiilaha.
Daacad u ahaanshahooda gaarka ah waxay ka dhigan tahay inaysan ku fiicneyn in keligood laga tago muddo dheer, oo ay noqdaan kuwo isku dhacsan waxna burburin kara .
Tan, oo ay weheliso xaqiiqda ah inay yihiin caan ku ah adag tahay in guriga la jajabiyo , waxaa loola jeedaa inay ku habboon yihiin guryaha kuwaas oo siin kara iyaga dareenka ay jecel yihiin.
Dharkooda dhaadheer awgood, eeygan waxaa loo yaqaanaa sida ay iyagu is-wataan, iyagoo ku dhex wareegaya qolalka sida sawirka daciifnimada iyo nimcada.
Eeyadan jecel-jecel waa ciyaar weyn oo loogu talagalay ku noolaanshaha magaalada, kuna kobcaya meelaha yaryar. Si kastaba ha noqotee, tan oo la yiraahdo si fiican ugama fiicna carruurta yaryar.
Eydan ayaa culeyskoodu yahay oo keliya 6 rodol, sidaa darteedna kuma qaadaneyso xoog badan ama cadaadis inay si shil ah u dhaawacaan eeyahaas. Sidaas darteed, eeyadan ayaa sifiican uga dhex shaqeeya guryaha ay kujiraan dhalinyarada iyo kor, halkaas oo ciyaarta ay tahay in laga ilaaliyo.
In kastoo way jecel yihiin inay ciyaaraan , eeyahaani waxay leeyihiin dabeecad gaaban, mana ku fiicnaadaan ciyaarta qallafsan, taas oo laga yaabo inay ka dhalato inay ku ciyaan ama ay nipping carruurta.
Guud ahaan, Chihuahuas waa xayawaan jilicsan oo jecel. Marka laga hadlayo xayawaanka kale, waxay leeyihiin doorbid aad u adag - Chihuahuas kale!
Haddii la dhexgalo da 'yar waxay la jaan qaadi karaan xayawaannada kale, iyada oo Chihuahuas ka weyn ay doorbidayaan inay la noolaadaan Chihuahuas kale.
Haddii aad eygaaga ku haysanaysid xayawaan kale, waxaa muhiim ah inaad xusuusnaato in Chihuahua's ay leeyihiin wadiiqo hinaase ah haddii ay dareemaan ma helayaan feejignaan ku filan .
Cillad yar oo Chihuahuas leh oo dheer, iyo dabeecadda difaaca awgeed, eeygan ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco cudurka 'Synd Dog Syndrome'. Tani waa dabeecado taxane ah oo ay ka mid yihiin:
Dhammaan dabeecadahaan waxaa lagu sixi doonaa eeyaha waaweyn, laakiin, kuma jiraan eeyaha yar yar cabirkooda awgood. Qaar badan oo ka mid ah dabeecadahaas oo si wadajir ah loo wada arko ayaa eyga ku adkeyn kara inuu la noolaado.
Si loo joojiyo tan ka soo bixitaanka, u deji xuduud joogto ah eeygaaga oo hubi inaad si wanaagsan ula dhaqanto iyaga.
Isticmaalka Cuntada Maalinlaha ah
Halkii aad cuni lahayd hal cunto oo weyn maalintii, Chihuahuas waa inuu cunaa seddex ama afar cunto oo yaryar, tani waxay la mid tahay Chihuahuas Timo Dheer sidoo kale.
Chihuahuas waxay leeyihiin a qaab dhismeedka lafaha oo aad u wanaagsan , gaar ahaan daankooda hoose, oo sidaas darteed waa muhiim in la hubiyo inay cunaan cuntadooda si loo ilaaliyo qaab-dhismeedkan.
Markaad xulaneyso cunto eeygaaga, waxaa muhiim ah inaad hubiso inaad doorato cunno leh milix yar.
Cunnooyinka milixdu ku badan tahay ayaa si dhakhso leh u fuuqbaxaya eeygaaga yar, taasoo keenta eey jiran. Doorashada cuntada loogu talagalay eeyaha yaryar ayaa gacan ka geysan doonta baabi'inta arrintan.
Isku day inaad soo qaadatid cunnooyinka aan hadhuudhka lahayn, maadaama caloosha eeyga aan loogu talagalin in lagu farsameeyo tiro badan oo sarreen ama shaciir ah.
Chihuahuas jecel inaad calaliyo waxaad u baahan kartaa inaad ka fiirsato inaad siiso ulaha ilkaha. Ama waxaad isku dayi kartaa wan cayriin ama laf hilib lo'aad muddo 15 daqiiqo ah maalintii - intaas kaliya kuma eka daamankooda yar ee mashquulka ah, laakiin, waa cunno aad u nafaqo badan oo u dhaqma sida caday dabiici ah.
Shuruudaha Jimicsiga Maalinlaha ah
Daqiiqado 20 ilaa 30 daqiiqo
Chihuahua oo leh Timo Dheer wuxuu jeclaan doonaa inuu firfircoonaan waana had iyo jeer u ciyaaro .
Lugahooda yar ayaa macnaheedu yahay in laga yaabo inay si buuxda jimicsi uga sameeyaan iyagoo raacaya bini'aadamkooda maalintii oo dhan, laakiin, tani bedel uma noqon karto socodka.
Iskuday inaad socodsiiso eeygaaga qiyaastii nus saac maalin kasta, ukalaba laba socod oo yaryar.
Markaad socotid eeygaaga, hubi inaad isticmaasho suunka (ka soo horjeedda qoorta) sida cadaadis badan oo qoorta ah dhici karta burburka tracheal .
Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad Chihuahua ku hayso xadhig intaad dibada u socoto, eeyahaani waxay leeyihiin rabitaan xoog leh oo ay ku baacsadaan, taas oo mar alla markii ay laado, ka dhigi karta dib-u-wicitaan aad u adag.
Sababtoo ah ilaa cabirkooda yar , Eygan si dhaqso leh ayuu u qabsan karaa, sidaa darteed waxay u muuqdaan inaysan ku fiicnayn cimilada qabow sida eeyaha kale .
Chihuahua Long Haired wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro sida dhuumasho iyo raadso , sida helitaanka milkiilahooda iyo helitaanka jacayl iyo fiiro gaar ah ayaa aad ugu riyaaqi kara eeyahaas.
Ha u ogolaan in cabirkooda yar iyo waji quruxsan ayaa ku nacas ah , Chihuahua Timo Dheer waa eey aad u caqli badan oo madax adag.
Tabobar la'aan iyo soohdimaha, eeyahaani waxay ku ordi doonaan gurigaaga.
Kahor intaadan eeygaaga guriga keenin, la fadhiiso dhammaan xubnaha qoyska oo aad sameysid soohdimahaaga gaarka ah eeygaaga:
Eygaaga ma loo oggolaan doonaa alaabta guriga, oo ay ku jiraan sariiraha qolalka jiifka?
Xagee ardaygaagu seexan doonaa habeenkii, ma loo oggolaan doonaa qolka jiifka ama ma ku seexdaan jikada?
Immisa jeer ayaa ilmahaaga la quudin doonaa, iyo immisa jeer maalintii?
Eeyaha badankood waxay ku fiicnaadaan jadwalka joogtada ah, eeyaha aan lahayn soohdimahan waxaa laga yaabaa inay yeeshaan cillad yar oo ey.
Iskuday inaad adeegsato guji eygaaga si aad uga faa'iideysatid sirdoonkaaga eeyga eyga. Chihuahuas timo dhaadheer ayaa si dabiici ah u ciyaaraya oo xiiso leh, markaa adeegsiga dhag-gujiyaha waa hab dabka lagu hubiyo oo lagu soo jiito dareenka eeygaaga.
Halkaas, Chihuahua's waxay ku barwaaqoobaan taabashada, markaa hubi inaad u isticmaasho tan inaad ku amaanto eygaaga sidoo kale adoo adeegsanaya tilmaamo hadal ah iyo abaalmarinno cunno ah.
Walaaca ugu weyn ee laga qabo Chihuahua Haired Long Haired waa u janjeedha horumarinta Luxation Patellar.
Tani waa xaalad saameyn ku leh awoodda si dhaqso ah loogu dhaqaajin karo laabatooyinka jilibka, taasoo keentay xaalado kale sida osteoarthritis.
Waxay kuxirantahay darnaanta xaalada Raaxada Patellar, waxaa lagu daaweyn karaa daawo ama xaalado aad u daran, qalliin.
Cabirkooda oo aad u yar awgood, eeyadan ayaa halis ku jira horumarinta hypoglycaemia , ama sonkorta dhiiga oo hooseysa.
Xaaladdaani way soo baxdaa maxaa yeelay eeygaaga kuma lahan muruq ku filan jirkooda yar si uu u hanto tamar ku filan.
Sidaa awgeed, xaaladan waxaa lagu maareyn karaa iyada oo eygaaga aad siiso cunnooyin yar yar si joogto ah maalintii oo dhan, iyo iibsashada cuntada eyga oo si gaar ah loogu talagalay eeyaha yaryar.
Sidii hore loo soo sheegay, chihuahuas waxay leeyihiin qaab dhismeed laf aad u jilicsan, oo ay ku jiraan daanka hoose, markaa ilkahoodu waxay u baahan yihiin baaritaan ilkaha oo joogto ah oo ay la socdaan dhakhtar xoolaha.
Waxa kale oo jira suurtagal ah in timo dhaadheer ay horumariso mid ka mid ah xaaladaha soo socda:
Iyada oo ay taasi jirto, Chihuahuas Timo dheer ayaa caan ku ah nolol farxad leh, iyo nolol caafimaad leh, celcelis ahaan cimriga qofka inta udhaxeysa 15 iyo 20 sano. Si ka duwan ilmaadeeradooda, Teacup Chihuahuas, kuwaas oo u nugul inay yeeshaan dhibaatooyin caafimaad kaliya cabirkooda darteed.
Chihuahua waa eey yar , Nooc toy ah oo uu aqoonsaday Naadiga Kennelka Mareykanka, oo culeyskiisu yahay 6lb.
Waxay leeyihiin dhago waaweyn, saddex geesood ah, af gaaban iyo indho indheer garad ah. Lugahooda iyo dabadooda ayaa saami u ah jirkooda.
Marka ay timaado qaabka madaxa, waxaad heli kartaa laba nooc:
Apple ayaa madax u noqday
Deer baa madax u baxay
Apple wuxuu madax u ahaa Chihuahuas
Madaxa Apple Chihuahua waa nooca Chihuahua ee lagu arko heerka cawdu. Muzzles-kooda waxay wajahayaan fooddooda xagal 90-degree ah oo abuuraya qaabkaas caadiga ah ee L.
Tani waxay keenaysaa in indhahoodu ay waxoogaa madaxooda ka soo boodaan si ay u abuuraan wajigaas caadiga ah ee chihuahua.
Cawshu waxay madax u noqotay Chihuahuas
Madaxa Deer Chihuahua wuxuu leeyahay san yar oo dhererkiisu dheer yahay, iyo xagal jilicsan oo jilicsan halkaasoo muusigoodu la kulmayo foolkooda, qiyaastii 45 darajo.
Noocan Chihuahua ma aqoonsana AKC laakiin waa ka sharaf yar yahay.
Chihuahua Timo Dheer waxay noqon kartaa madow, bunni, bunni, casaan, buluug, cadaan, iyo kareem. Waxay sidoo kale yeelan karaan bi ama xitaa jaakadaha midabada leh ee saddexda ah .
Markaad gacanta ku hayso da 'yarta Chihuahuas, waxaa muhiim ah inaad taxaddar ku sameyso mooramkooda (yacni barta jilicsan). Tani waxay u dhigantaa a fontanelle ee ilmaha yar .
Tan macnaheedu waa asbuucyadooda ugu horreeya noloshooda, madaxoodu wuu jilicsan yahay, laakiin waa inuu sii adkaadaa waqti. Daryeelka waa in la qaadaa inta la qabanayo eeydan jilicsan.
Nooca jaakadooda darteed, waxaa muhiim ah in timahooda dhaadheer si joogto ah loo cadaydo (ugu yaraan laba jeer usbuucii) si looga fogaado matting .
Iskuday inaad isticmaasho buraash jilicsan oo bir ah ama shanlo si aad ugu cadayato timahooda dhaadheer iyo jaakad siman.
Dabeecad qariib ah oo u gaar ah noocyadan ayaa ah inay u janjeeraan inay timahooda ku daadiyaan burooyin ka soo horjeedda timaha shaqsiga. Tani waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo yara fududaan kara in la nadiifiyo kadib, maadaama timaha oo dhan ay ku yaalliin hal kubbadda yar ee timaha.
Timo dhaadheer Chihuahuas ma u baahan qubays badan (maadaama ay tani qallajin karto maqaarkooda), iskuday inaadan iska maydhin iyagoon si gaar ah wasakh u ahayn, ama diirtu fuulo mooyee. Markaad maydhanayso, hubi inaadan biyo ka helin dhagahooda.
Sawir - seddex cunug Gaaban Chihuahua.
Haddii aad raadineysid eey yar oo qalbi weyn leh, Chihuahua Timo Dheer ayaa adiga kuu noqon kara.
Waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah (qaababka buuqa, amaanta wanaagsan, jimicsiga iyo qurxinta) marka hubi inaad haysato waqti badan oo aad ugu hibeeysid wehelkaaga canine. Sidaa darteed, ha ku khaldamin tarankaan eeyaha dhabta ah maadaama aysan ku raaxeysan in la qaado oo la koolkooliyo si firfircoon. Chihuahua oo leh timo dhaadheer oo timo dhaadheer ayaa runtii ku raaxeysan doona ka qeyb qaadashada cayaaraha eyga.
Tani ma noqon karto eeyga adiga haddii aad ka maqantahay guriga wax badan ama haddii aad carruur yaryar ku haysato guriga.
Haddii aad jeceshahay codka Chihuahua, laakiin, aadan ahayn 100%, tixgeli helitaanka isku darka Chihuahua . Eeyahaani noocyada isku dhafan ah waxay isku daraan kuwa ugu fiican labada adduun.
Waxaa laga yaabaa sassiness of Chihuahua oo lagu daray majaajilada Pug si loo abuuro Pughuahua? Ama dabeecadda ciyaarta ee Dachshund si loo abuuro Chiweenie?
Ma ku leedahay Chihuahua dhabanka leh guriga? Miyaad ka fikireysaa inaad mid hesho? Xor ayaad u tahay inaad nala soo socodsiiso fikradahaaga adoo nooga tagaya faallooyinka qeybta faallooyinka ee hoose.
rottweiler isku darka eeyaha adhijirka jarmalka
isku gudub inta u dhaxaysa cocker spaniel iyo poodle
poodle oo ay ku ciyaaraan iyo maltise
Eeyadu ma cuni karaan cananaaska qallalan